माधव नेपालको नयाँ पार्टीको नामनै बाहिरियो , कुन जिम्मेवारीमा बस्छन झलनाथ र बामदेव ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
माधव नेपालको नयाँ पार्टीको नामनै बाहिरियो , कुन जिम्मेवारीमा बस्छन झलनाथ र बामदेव !
नेकपा एमालेबाट विभाजित भई बन्न लागेको नयाँ दलको खाका तयार भएको छ । दलको सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार भइसकेको छ ।विश्वस्त स्रोतका अनुसार नयाँ दलको नाम समेत जुरिसकेको छ ।
कम्युनिस्ट र समाजवादी शब्द राख्ने गरी यसलाई अन्तिम टुंगो माधव नेपाल र बामदेव गौतम बसेर गर्दैछन् । उनीहरुले दिल्लीमा उपचाररत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि परामर्श गर्ने बुझिएको छ । माधव नेपाल
नयाँ दलका लागि डकुमेन्ट घनश्याम भुसालले तयार गरेका हुन् । भुसाललाई नै नयाँ दलको महासचिव बनाउने गरी नेपाल र गौतमले सहमति बनाएको विश्वस्त स्रोतल बताएको छ ।
सुरेन्द्र पाण्डेको पनि नाम आएकोमा उनी नेपाल पक्षमा आउने नआउने टुंगो लागेको छैन । यसैगरी, नयाँ दलमा माधव नेपाल नै अध्यक्ष रहने बुझिएको छ ।
झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले वरिष्ठ नेता या सहअध्यक्षमध्ये कुनै पद पाउने बुझिएको छ । एमालेमा रहँदा स्थायी कमिटीमा रहेका र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरुले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने गरी तयारी गरिएको छ ।
सांसद भएकाहरुले पनि पार्टी कमिटीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने बुझिएको छ । गणतन्त्रका पिता प्रचण्ड संग, गणतन्त्र बिरोधि केपी ओलिको तुलना हुनै सक्दैन – नेता रायमाझी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव आलोक रायमाझी भन्छन्, “अहिलेको राजनीतिक अन्योल र राजनीतिक अस्तव्यस्तता दलाल संसदीय व्यवस्थाको उपज हो । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हारालुछ हुनु स्वाभाविक छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो दलाल संसदीय ब्यबस्थाको उत्तम पात्र हुन् । केपी ओलि मुक्त देश नबनाए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने पक्का छ ।”
“यो दलाल व्यबस्थाका प्रधानमन्त्री केपी ओलि नक्कली र ढोङी राष्ट्रवादी हुन् वास्तवमा उनी खतरनाक इन्डो – अमेरिकी रणनीतिका मतियार हुन् त्यसकारण प्रचण्ड उनी भन्दा कैयौं गुणा देशभक्त छन्”
उनी अगाडि थप्छन् “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा मुल योगदान कमरेड प्रचण्डको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पिता प्रचण्ड हुन् ।प्रचण्डले अब कुनै आग्रह पुर्बाग्रह बिना माओवादी र पुर्व माओवादीलाई एक ठाउँ ल्याउन मुल भुमिका खेलेर सबै एक ठाउँ ल्याउन भुमिका खेले भने असली नायक रहिरहन बाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
सबैलाई एकठाउ बनाउन म र हाम्रो पार्टीले उनलाई पुरै सहयोग गर्ने छ, तर अब मालेमावाद लाई स्विकार्दै अगाडि बड्नुको विकल्प छैन । अब प्रचण्डले मालेमाबादीहरु लाई एक ठाउँमा ल्याउन ढिलो गर्नु हुदैन, अगाडि भने” सत्ता समीकरणका लागि जे जस्ता खेल भइरहेका छन्
तिनले नेपाल र नेपाली जनताका लागि केही फरक पर्नेछन् । मुलुकको स्थिति झन भद्रगोल हुनेछ । तर, ओलीलाई विस्थापित गर्न जरुरी छ ।” नेता रायमाझीले अगाडि थपे “केपी ओलि मुक्त देश नबनाए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने पक्का छ ।
गणतन्त्रका पिता प्रचण्ड हुन् भने गणतन्त्रको कट्टर बिरोधि केपी ओलि हुन ।” अदालतको निर्णय पछी गोपाल किराती नेतृत्वको नेपाल (माओवादी केन्द्र)ले के निर्णय गर्छ हेर्न बाकी नै छ । नेता रायमाझी त्यही पार्टीका सचीव हुन ।